ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန် ကြိုးစားလာတဲ့ ဘီလျံနာ (သို့) Spotify ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် Daniel Ek
6 Apr 2018 . 11:23 AM
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ဘွဲ့မရရင်ပဲ လူမွှေးလူတောင် မပြောင်တော့သလို၊ တစ်သက်လုံးပဲ ဆင်းရဲတွင်းကို ခုန်ဆင်းရတော့မလို မြင်တတ်ကြပါတယ်။ နည်းပညာခေတ်ကို ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ဘွဲ့ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ဟာ အရည်အချင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘာမှကို မဟုတ်တော့ပါဘူး။ (တကယ်တမ်းတော့ ဘွဲ့ဆိုတာ မှတ်တိုင်တစ်ခုပါပဲ။) ဘွဲ့မရဘဲနဲ့လည်း ဘီလျံနာဖြစ်နေတဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ။ မြင်လွယ်အောင် ပြောရရင် ‘Bill Gates’ ၊ ‘Steve Jobs’ ၊ ‘Amancio Ortega’ နဲ့ ‘Mark Zuckerberg’ တို့ဟာ ဘွဲ့လက်မှတ်သမားတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အခုတစ်ပတ်မှာလည်း လူငယ်တွေ စိတ်အားတက်ကြွစေဖို့ ‘Spotify’ ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင် ‘Daniel Ek’ ရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
‘Daniel Ek’ ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးကို ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတော့ဟုမ်းမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူ့ကို မေးတာက ၁၉၈၃ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁) ရက်။ သူ့မိဘတွေက လူကုံထံအသိုင်းအဝိုင်းက မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တည်းက ဝက်ဘ်ဆိုက်ရေးတတ်နေပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ချင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဆွဲပေးတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုတောင် ဆွဲပေးလာနိုင်တဲ့အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဆွဲရင် ပထမတုန်းက ဒေါ်လာတစ်ရာ၊ နောက်တော့ နှစ်ရာ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်လာငါးထောင်ကျော်ရလို့ သူ့အတွက် မုန့်ဖိုးကောင်းကောင်းရတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိ်န်တုန်းက (၁၆) နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အပ်ချင်တဲ့ ဖောက်သည်တွေ များလာတော့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ ပြန်ခန့်လာနိုင်ပါတယ်။ (သူငယ်ချင်းတွေက စာသင်ခန်းထဲက ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆွဲခဲ့တာပါ။) တချို့လတွေမှာ သူ့ရဲ့ဝင်ငွေက ဒေါ်လာငါးသောင်းကျော်ရှိလို့ စက်ပြင်ဆရာလုပ်နေတဲ့ သူ့ဖခင်ထက်တောင် ဝင်ငွေကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အသက်က (၁၈) နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူ့အောက်မှာ ကျောင်းသားဝန်ထမ်းက (၂၅) ယောက်ရှိနေပါပြီ။ တန်ဖိုးကြီးဂစ်တာတွေ ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်တွေနဲ့ တီဗွီတွေ အများကြီးဝယ်လာမှ သားတော်မောင်ဟာ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးဝင်နေတာ မိဘနှစ်ပါး သတိထားမိသွားပါတယ်။
၂ဝဝ၂ခုနှစ်မှာ အထက်တန်းအောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့မိဘတွေက ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ ‘Daniel Ek’ ကို ကျောင်းကောင်းကောင်းကို တက်စေချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ‘Daniel Ek’ ကတော့ ကျောင်းလခချိုသာတဲ့ ‘Royal Institute of Technology’ မှာပဲ အင်ဂျင်နီယာပညာကို သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ နည်းပညာအလုပ်ကိုပဲ အားသန်နေတဲ့သူဟာ တက္ကသိုလ်ကို ရှစ်ပတ်လောက်ပဲ တက်ပြီး စီးပွားရေးလောကထဲ ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာမိဘတွေသာဆိုရင် ဘွဲ့မရရင် ဘာဖြစ်မယ်၊ ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သားသမီးကို ပိတ်ပင်ဦးမှာပါ။ သူဟာ ‘Tradera’ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ‘Senior Developer’ ရာထူးနဲ့ ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ‘Stardoll’ ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းကုမ္ပဏီမှာ ‘Chief Technology Officer’ အနေနဲ့ တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အွန်လိုင်းကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက် ‘Advertigo’ ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ဝဝ၆ခုနှစ်မှာ ‘Advertigo’ ကို ‘TradeDoubler’ ကုမ္ပဏီဆီမှာ ဒေါ်လာ ၁.၂၅ သန်းနဲ့ ရောင်းချလိုက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ (၂၃) နှစ်အရွယ်တည်းက သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်နေပါပြီ။
‘Daniel Ek’ ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှာနိုင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ကြွားဝါဖို့ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ “အကြွားအဝါဆိုတာ လူတစ်ယောက်ကို နာကျင်စေတယ်၊ မသုံးနိုင်တော့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဓာတ်ကျစေတယ်”လို့ မကြာခဏပြောလေ့ရှိတယ်။
“ပိုက်ဆံရှိလာရင် မင်းကို ဘာလုပ်ပါလို့
ဘယ်သူကမှ လာပြောမှ မဟုတ်တော့ဘူး”
ကုမ္ပဏီကို ရောင်းပြီးတော့ ‘Daniel Ek’ ဟာ ခဏအနားယူလိုက်သေးတယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတာ အရေးမကြီးဘူး၊ စိတ်အားထက်သန်တဲ့အလုပ်ကိုသာ လုပ်နေရရင် အလိုလိုအောင်မြင်လာမယ်ဆိုတာ သူ သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၂ခုနှစ်မှာ ‘Napster’ နဲ့ ‘Kazaa’ တို့လို ‘Music Streaming Service’ တွေဟာ တေးသီချင်းမူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပြဿနာတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာ “ခိုးယူးကိစ္စတွေနဲ့ တရားရင်ဆိုင်လို့ မဖြစ်ဖူး။ ဂီတရပ်ဝန်းနဲ့လည်း ညှိနှိုင်းပြီး ‘Music Streaming Service’ တစ်ခုဖို့ တည်ထောင်ချင်တယ်။ အဲဒါဟာ Spotify ပါပဲ” လို့ ဆိုလာပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ ‘Martin Lorentzon’ နဲ့ ကြိုးပမ်းရာကနေ ၂ဝဝ၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့မှာ ‘Spotify’ ဆိုတဲ့ ‘Music Streaming Service’ ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ‘Spotify’ မှာလည်း ‘Spotify Free’ ဆိုတဲ့ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပြင် ‘Spotify Premium’ နဲ့ ‘Spotify Family’ တို့လို ‘Paid Service’ တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ‘Spotify’ ဟာ ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေးတွေကို ဂီတပိုင်ရှင်တွေအတွက် (၇ဝ) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပမှာ လူသုံးများနေပေမယ့် နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်ရဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေရလို့ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်ရောက်မှသာ အမေရိကန်နိုင်ငံအထိ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Spotify Founders Daniel Ek amd Martin Lorentzon
အခုဆိုရင် လစဉ်အသုံးပြုသူ သန်း (၁၆ဝ) ကျော်ရှိလာပြီး ‘Paid Service’ အသုံးပြုသူ သန်း (၇၁) ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်မှာ အမြတ်ငွေ ၅ ဘီလီယံ (၅,ဝဝဝ သန်း) ရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ‘Daniel Ek’ ဟာ CEO အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ‘Martin Lorentzon’ က ‘Chairman’ အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ‘Spotify’ ဟာ ‘Apple TV’ နဲ့ ‘Amazon Music Unlimited’ တို့လို ပြိုင်ဘက်တွေရှိနေပေမယ့် ဈေးကွက်ဝေစု (၃၆) ရာခိုင်နှုန်းကို စိုးမိုးထားဆဲပါ။ ၂ဝ၂ဝခုနှစ်ရောက်ရင် ‘Spotify’ ရဲ့ ‘Paid Service’ အသုံးပြုသူဟာ နှစ်ဆတိုးလာမယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့မှာ ‘Spotify’ ကုမ္ပဏီကို အများပိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး ရှယ်ယာတစ်ယူနစ်ဈေးနှုန်းဟာ ၁၄၉. ဝ၁ ဒေါ်လာအထိရှိလာတဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ ၂၆ ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ‘Spotify’ ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာ (၉) ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ‘Daniel Ek’ ရဲ့အသားတင်ကြွယ်ဝမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံ (၂,၅ဝဝ သန်း) အထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝတုန်းက ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ ကျောင်းထွက်ပြီး နည်းပညာလောကထဲကို ဝင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ (၃၅) နှစ်အရွယ်မှာ ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ ဘယ်သူသိခဲ့မှာလဲ။
ကိုယျ့ထူးကိုယျခြှနျ ကွိုးစားလာတဲ့ ဘီလြံနာ (သို့) Spotify ရဲ့ပဲ့ကိုငျရှငျ Daniel Ek
မွနျမာနိုငျငံမှာဆိုရငျ ဘှဲ့မရရငျပဲ လူမှေးလူတောငျ မပွောငျတော့သလို၊ တဈသကျလုံးပဲ ဆငျးရဲတှငျးကို ခုနျဆငျးရတော့မလို မွငျတတျကွပါတယျ။ နညျးပညာခတျေကို ရောကျလာတာနဲ့အမြှ ဘှဲ့ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျဟာ အရညျအခငျြးနဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ဘာမှကို မဟုတျတော့ပါဘူး။ (တကယျတမျးတော့ ဘှဲ့ဆိုတာ မှတျတိုငျတဈခုပါပဲ။) ဘှဲ့မရဘဲနဲ့လညျး ဘီလြံနာဖွဈနတေဲ့သူတှေ တဈပုံကွီးပါ။ မွငျလှယျအောငျ ပွောရရငျ ‘Bill Gates’ ၊ ‘Steve Jobs’ ၊ ‘Amancio Ortega’ နဲ့ ‘Mark Zuckerberg’ တို့ဟာ ဘှဲ့လကျမှတျသမားတှေ မဟုတျကွပါဘူး။ အခုတဈပတျမှာလညျး လူငယျတှေ စိတျအားတကျကွှစဖေို့ ‘Spotify’ ရဲ့ပဲ့ကိုငျရှငျ ‘Daniel Ek’ ရဲ့အကွောငျးကို ပွောပွခငျြပါတယျ။
‘Daniel Ek’ ဆိုတဲ့ လူငယျလေးကို ဆှီဒငျနိုငျငံ စတော့ဟုမျးမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့တယျ။ သူ့ကို မေးတာက ၁၉၈၃ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ (၂၁) ရကျ။ သူ့မိဘတှကေ လူကုံထံအသိုငျးအဝိုငျးက မဟုတျပါဘူး။ သူက ဆယျကြျောသကျအရှယျတညျးက ဝကျဘျဆိုကျရေးတတျနပွေီ။ သူငယျခငျြးတှေ လုပျခငျြတဲ့ ဝကျဘျဆိုကျတှကေို ကိုယျတိုငျဆှဲပေးတယျ။
နောကျပိုငျးမှာ ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ဝကျဘျဆိုကျတှကေိုတောငျ ဆှဲပေးလာနိုငျတဲ့အထိ တိုးတကျလာခဲ့ပါတယျ။ ဝကျဘျဆိုကျတဈခုဆှဲရငျ ပထမတုနျးက ဒျေါလာတဈရာ၊ နောကျတော့ နှဈရာ။ နောကျပိုငျးမှာ ဒျေါလာငါးထောငျကြျောရလို့ သူ့အတှကျ မုနျ့ဖိုးကောငျးကောငျးရတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက (၁၆) နှဈပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ဝကျဘျဆိုကျအပျခငျြတဲ့ ဖောကျသညျတှေ မြားလာတော့ သူငယျခငျြးတှကေိုတောငျ ဝနျထမျးအနနေဲ့ ပွနျခနျ့လာနိုငျပါတယျ။ (သူငယျခငျြးတှကေ စာသငျခနျးထဲက ကှနျပြူတာတှနေဲ့ ဝကျဘျဆိုကျဆှဲခဲ့တာပါ။) တခြို့လတှမှော သူ့ရဲ့ဝငျငှကေ ဒျေါလာငါးသောငျးကြျောရှိလို့ စကျပွငျဆရာလုပျနတေဲ့ သူ့ဖခငျထကျတောငျ ဝငျငှကေောငျးခဲ့ပါတယျ။ အသကျက (၁၈) နှဈပဲ ရှိသေးတယျ။ သူ့အောကျမှာ ကြောငျးသားဝနျထမျးက (၂၅) ယောကျရှိနပေါပွီ။ တနျဖိုးကွီးဂဈတာတှေ ၊ ဗီဒီယိုဂိမျးစကျတှနေဲ့ တီဗှီတှေ အမြားကွီးဝယျလာမှ သားတျောမောငျဟာ ပိုကျဆံတှအေမြားကွီးဝငျနတော မိဘနှဈပါး သတိထားမိသှားပါတယျ။
၂ဝဝ၂ခုနှဈမှာ အထကျတနျးအောငျခဲ့ပါတယျ။ သူ့မိဘတှကေ ဉာဏျကောငျးတဲ့ ‘Daniel Ek’ ကို ကြောငျးကောငျးကောငျးကို တကျစခေငျြခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ‘Daniel Ek’ ကတော့ ကြောငျးလခခြိုသာတဲ့ ‘Royal Institute of Technology’ မှာပဲ အငျဂငျြနီယာပညာကို သငျယူခဲ့ပါတယျ။ နညျးပညာအလုပျကိုပဲ အားသနျနတေဲ့သူဟာ တက်ကသိုလျကို ရှဈပတျလောကျပဲ တကျပွီး စီးပှားရေးလောကထဲ ခွစေုံပဈဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီနရောမှာ မွနျမာမိဘတှသောဆိုရငျ ဘှဲ့မရရငျ ဘာဖွဈမယျ၊ ညာဖွဈမယျဆိုပွီး သားသမီးကို ပိတျပငျဦးမှာပါ။ သူဟာ ‘Tradera’ ဝကျဘျဆိုကျမှာ ‘Senior Developer’ ရာထူးနဲ့ ဝငျလုပျခဲ့တယျ။ ပွီးတော့ ‘Stardoll’ ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမျးကုမ်ပဏီမှာ ‘Chief Technology Officer’ အနနေဲ့ တာဝနျယူခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ အှနျလိုငျးကွျောငွာဝကျဘျဆိုကျ ‘Advertigo’ ကို တညျထောငျခဲ့ပွနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂ဝဝ၆ခုနှဈမှာ ‘Advertigo’ ကို ‘TradeDoubler’ ကုမ်ပဏီဆီမှာ ဒျေါလာ ၁.၂၅ သနျးနဲ့ ရောငျးခလြိုကျတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူဟာ (၂၃) နှဈအရှယျတညျးက သနျးကွှယျသူဌေးဖွဈနပေါပွီ။
‘Daniel Ek’ ဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ပိုကျဆံတှေ အမြားကွီးရှာနိုငျလာတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ ကွှားဝါဖို့ စိတျမဝငျစားပါဘူး။ “အကွှားအဝါဆိုတာ လူတဈယောကျကို နာကငျြစတေယျ၊ မသုံးနိုငျတော့ရငျ ကိုယျ့ကိုယျကို စိတျဓာတျကစြတေယျ”လို့ မကွာခဏပွောလရှေိ့တယျ။
“ပိုကျဆံရှိလာရငျ မငျးကို ဘာလုပျပါလို့
ဘယျသူကမှ လာပွောမှ မဟုတျတော့ဘူး”
ကုမ်ပဏီကို ရောငျးပွီးတော့ ‘Daniel Ek’ ဟာ ခဏအနားယူလိုကျသေးတယျ။ ပိုကျဆံဆိုတာ အရေးမကွီးဘူး၊ စိတျအားထကျသနျတဲ့အလုပျကိုသာ လုပျနရေရငျ အလိုလိုအောငျမွငျလာမယျဆိုတာ သူ သဘောပေါကျလာခဲ့တယျ။ ၂ဝဝ၂ခုနှဈမှာ ‘Napster’ နဲ့ ‘Kazaa’ တို့လို ‘Music Streaming Service’ တှဟော တေးသီခငျြးမူပိုငျခှငျ့နဲ့ ပွဿနာတှတေကျနတေဲ့အခြိနျမှာ “ခိုးယူးကိစ်စတှနေဲ့ တရားရငျဆိုငျလို့ မဖွဈဖူး။ ဂီတရပျဝနျးနဲ့လညျး ညှိနှိုငျးပွီး ‘Music Streaming Service’ တဈခုဖို့ တညျထောငျခငျြတယျ။ အဲဒါဟာ Spotify ပါပဲ” လို့ ဆိုလာပါတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ ၂ဝဝ၆ ခုနှဈမှာ ‘Martin Lorentzon’ နဲ့ ကွိုးပမျးရာကနေ ၂ဝဝ၈ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ (၇) ရကျနမှေ့ာ ‘Spotify’ ဆိုတဲ့ ‘Music Streaming Service’ ကို တညျထောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ‘Spotify’ မှာလညျး ‘Spotify Free’ ဆိုတဲ့ အခမဲ့ဝနျဆောငျမှုအပွငျ ‘Spotify Premium’ နဲ့ ‘Spotify Family’ တို့လို ‘Paid Service’ တှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးခဲ့ပါတယျ။ ‘Spotify’ ဟာ ရရှိလာတဲ့ ငှကွေေးတှကေို ဂီတပိုငျရှငျတှအေတှကျ (၇ဝ) ရာခိုငျနှုနျးအထိ ပွနျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဥရောပမှာ လူသုံးမြားနပေမေယျ့ နိုငျငံတကာမူပိုငျခှငျ့ရဖို့ စောငျ့ဆိုငျးနရေလို့ ၂ဝ၁၁ခုနှဈရောကျမှသာ အမရေိကနျနိုငျငံအထိ တိုးခြဲ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။
အခုဆိုရငျ လစဉျအသုံးပွုသူ သနျး (၁၆ဝ) ကြျောရှိလာပွီး ‘Paid Service’ အသုံးပွုသူ သနျး (၇၁) ကြျောလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ၂ဝ၁၇ခုနှဈမှာ အမွတျငှေ ၅ ဘီလီယံ (၅,ဝဝဝ သနျး) ရတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ‘Daniel Ek’ ဟာ CEO အဖွဈ တာဝနျယူခဲ့ပွီး ‘Martin Lorentzon’ က ‘Chairman’ အဖွဈ လုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။ အခုခြိနျမှာ ‘Spotify’ ဟာ ‘Apple TV’ နဲ့ ‘Amazon Music Unlimited’ တို့လို ပွိုငျဘကျတှရှေိနပေမေယျ့ ဈေးကှကျဝစေု (၃၆) ရာခိုငျနှုနျးကို စိုးမိုးထားဆဲပါ။ ၂ဝ၂ဝခုနှဈရောကျရငျ ‘Spotify’ ရဲ့ ‘Paid Service’ အသုံးပွုသူဟာ နှဈဆတိုးလာမယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။ ၂ဝ၁၈ ခုနှဈ ဧပွီလ (၂) ရကျနမှေ့ာ ‘Spotify’ ကုမ်ပဏီကို အမြားပိုငျအဖွဈ ပွောငျးလဲလိုကျပွီး ရှယျယာတဈယူနဈဈေးနှုနျးဟာ ၁၄၉. ဝ၁ ဒျေါလာအထိရှိလာတဲ့အတှကျ ကုမ်ပဏီရဲ့တနျဖိုးဟာ ၂၆ ဘီလီယံအထိ မွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ‘Spotify’ ကုမ်ပဏီရဲ့ရှယျယာ (၉) ရာခိုငျနှုနျးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ‘Daniel Ek’ ရဲ့အသားတငျကွှယျဝမှုဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂.၅ ဘီလီယံ (၂,၅ဝဝ သနျး) အထိရှိလာပွီဖွဈပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျဘဝတုနျးက ယုံကွညျမှုတဈခုတညျးနဲ့ ကြောငျးထှကျပွီး နညျးပညာလောကထဲကို ဝငျခဲ့တဲ့ လူငယျတဈယောကျဟာ (၃၅) နှဈအရှယျမှာ ဘီလြံနာတဈယောကျဖွဈလာမယျလို့ ဘယျသူသိခဲ့မှာလဲ။